जुकरबर्ग किन गए चीन ? फुकुवा होला त चीनमा फेसबुक ? - IAUA
ramkrishna October 31, 2017	जुकरबर्ग किन गए चीन ? फुकुवा होला त चीनमा फेसबुक ?
फेसबुकले पछिल्लो समयमा चिनिया विज्ञापनदाताका विज्ञापनहरु बाहिरी विश्वमा बेच्नका लागि गरिरहेको सहयोगलाई फेसबुकको चीन प्रवेशको पूर्वाभ्यासका रुपमा विश्लेषण गरिएको छ । एजेन्सी
Previous Previous post: अब अनलाइनबाटै पूजाआजा बुकिङ र प्रसाद ग्रहण
Next Next post: पहिलो नेपाली महिला रेस्लरको रोमाञ्चक कथा